Manulife ဘ၀အာမခံ | အသက်အာမခံ
သင့်ကိုယ်သင် ကာကွယ်ထားခြင်းက သင့်မိသားစုအတွက် အကာအကွယ်ပေးခြင်းပါပဲ။
သင်နှင့် သင့်မိသားစုအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းမှုနှင့် အကာအကွယ် ပေးမှု
သင့်ကိုယ်သင်ကာကွယ်ထားခြင်းကသင့်မိသားစုအတွက်အကာအကွယ်ပေးခြင်းပါပဲ။ သေဆုံးခြင်း (သို့မဟုတ်) ရာသက်ပန် ကိုယ်လက်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းတို့ကို ငွေကြေးအားဖြင့် အကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ အသက်အာမခံအစီအစဥ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Manulife ရဲ့ဘ၀အာမခံနဲ့အတူ အခြေအနေအရပ်ရပ်တိုင်းမှာလုံခြုံမှုကို ရယူလိုက်ပါ။
သေဆုံးခြင်းနှင့် ရာသက်ပန် ကိုယ်လက်အင်္ဂါ
သေဆုံးခြင်းနှင့် ရာသက်ပန် ကိုယ်လက်အင်္ဂါမသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သည်ရှိသော် အာမခံထားရှိမှု အားလုံးရဲ့ ၂၀၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မတော်တဆမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ရင်လည်း ထပ်ဆောင်းအနေနဲ့ အာမခံထားရှိမှုရဲ့ ၂၀၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ထပ်မံရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သက်တမ်းပြည့် အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ငွေကြေးတန်ဖိုး
ကာကွယ်မှုအတွက် အသုံးပြုခြင်းမရှိခဲ့သော် ပေါ်လစီသက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့နေ့မှာ အာမခံထားရှိမှုရဲ့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ သင်ရွေးချယ်တဲ့ ပေါ်လစီဟာ စုဆောင်းထားသကဲ့သို့ တန်ဖိုးရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တတ်နိုင်တဲ့ငွေကြေး၊ လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်မှုနဲ့အညီ သင့်လျော်ရာသက်တမ်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ၁၀နှစ်အတွက်ပေးနိုင်တဲ့ ၁၀နှစ်စာအစီအစဥ် အပြင် နှစ် ၂၀စာပေးနိုင်တဲ့ အစီအစဥ်တွေလည်း ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရခြင်းအတွက် အကျိုုးခံစားခွင့်
Manulife ဘဝအာမခံအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက
ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ အသက်အာမခံထားခွင့်ရှိလဲ ?
အသက်အာမခံထားခွင့်အတွက် အနည်းဆုံး၁၆နှစ်ပြည့်ရပါမယ်။ ၁၀နှစ် အစီအစဥ်အတွက် အများဆုံး အသက်၅၅နှစ် အထိထားနိုင်ပါတယ်။ အနှစ် ၂၀ အစီအစဥ်အတွက် အများဆုံး အသက်၄၅နှစ်အထိ ထားနိုင်ပါတယ်။
အနည်းဆုံး ၀ယ်ယူထားရှိနိုင်မယ့်အာမခံ ကြေးငွေပမာဏ?
အာမခံကြေးငွေ အနည်းဆုံး သိန်း၅၀ မှစ၍ ၀ယ်ယူထားရှိနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ ပေါ်လစီ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာလဲ?
အာမခံကြေးငွေ အပြည့် သို့မဟုတ် သက်တမ်းအပြည့် အကျိုးခံစားခွင့် ပေးချေပြီးတဲ့အခါ ပေါ်လစီသက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အာမခံအစီအစဥ်ကို အချိန်မ‌ရွေး ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသလား?